Chọpụta ọdịnala kacha mma nke Ireland | Akụkọ Njem
Susana Garcia | | omenala, General, Ireland
Ireland, onye a na-akpọ Republic of Ireland guzobere ọdịbendị na ọdịnala akara. Isi obodo ya dị na Dublin, mana enwere obodo ndị ọzọ dị mkpa dịka Cork, Limerick ma ọ bụ Galway. N'okwu a, anyị ga-ekwu maka ọdịnala Ireland, ebe ọ bụ obodo na-adọta uche maka ụfọdụ n'ime ha, dịka ụbọchị St.
Mgbe anyị na-ekwu banyere Ireland anyị na-ekwu maka agwaetiti na-anya isi maka ọdịbendị na ọdịnala ya. Ọ bụ ezie na ọtụtụ narị afọ gara aga, jikọrọ ya niile na United Kingdom, ka ọ dị ugbu a naanị akụkụ ugwu bụ nke ya, nke butekwara ọtụtụ esemokwu. Mana gafee akụkọ ntolite ya enwere ọtụtụ ihe e ji mara ala a.
1 Saintbọchị Saint Patrick
3 Agbamakwụkwọ ndị ọdịnala na Ireland
4 Hurling, egwuregwu Irish
5 Egwuregwu Irish na ịgba egwu
6 Omsbọchị ụka
7 Pub na Guinness
Saintbọchị Saint Patrick
Nweghị ike ikwu maka Ireland n’ebughị ụzọ kwuo maka ụbọchị ụbọchị St. Bọchị nke a sitere na a Christian ezumike na Aims na-asọpụrụ Saint Patrick, onye nlekọta dị nsọ nke Ireland. Ọ na-eme ememe na March 17 na ihe niile na-mma na ahụkarị ike akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-metụtara nke a ụbọchị. Ọ bụ ụbọchị ezumike mba dị na Republic of Ireland, yabụ ọ bụ ezigbo ụbọchị iji mee mmemme a ma ọ bụrụ na anyị nọ n’agwaetiti a. Otu n'ime usoro ngosi a ma ama na-ewere ọnọdụ n'isi obodo, Dublin, ememe ndị ahụ na-adịkarị ọtụtụ ụbọchị. Ebe ọ bụla anyị ga-ahụ chamrock nke gosipụtara nkuzi nke Atọ n'Ime Otu dị nsọ nke Saint Patrick wetara na Ireland ma taa jikọtara ya na onyinyo nke Ireland.
N'aka nke ọzọ, enwere ike ịhụ ndị mmadụ yi uwe ndị na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na dịka ndị leprechauns na oriri nke Saint Patrick, n'ihi na ihe niile metụtara omenala ndị Irish. Ndị a leprechauns bụ leprechauns nke akụkọ ifo ndị Irish nakwa na ha na-eyi uwe mgbe niile na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ma nwee agwa mara mma. Ihe odide a bụ akụkụ nke ụfọdụ akụkọ akụkọ ndị ama ama nwere ọgbọ ọ bụla ma kwuo na ha na-ezobe ọla edo, yabụ mgbe ụfọdụ a na-eji ite ọla edo mara ha.
Agbamakwụkwọ ndị ọdịnala na Ireland
Na mba a kwa enwere omenaala n’ememe agbamakwụkwọ ahụ. Agbamakwụkwọ ndị Irish nwere usoro ụfọdụ nke ọdịnala na nke dị anya na agbamakwụkwọ ndị anyị maara. Yinggba eriri bụ ọdịnala mara mma nke di na nwunye na-etinye aka ha mgbe ha na-agụghachi okwu ha na-a swearụ iyi na ha ga-anọkọ. N'otu oge ahụ, onye ọ bụla duziri emume ahụ na-eji eriri dị iche iche nke ga-anọchi anya njikọ ahụ jikọ aka ha. E nwekwara ọdịnala nke iyi akpukponu inyinya nke nwere ihu ọma mana na taa agbanweela oge ụfọdụ ka ọ bụrụ akara ịnyịnya nke nwanyị na-alụ ọhụrụ. A na-ekwukwa na n’ụbọchị agbamakwụkwọ a ga-esi nri n’ụlọ nwanyị a na-alụ ọhụrụ na nwanyị a na-alụ ọhụrụ ga-eri nnu na oatmeal na mbido oriri ahụ iji nwee obi ụtọ.
Hurling, egwuregwu Irish
Este egwuregwu sitere na Celtic ma o nwere ike ọ gaghị ada anyị na mba anyị, mana ebe ọ dị ezigbo mkpa. A na-eji bọl na osisi ma ọ bụ osisi nke yiri hockey egwu ya ma saa mbara. Nwere ike ịgba ọsọ na-ebu bọọlụ na ala, na-adabere na osisi ma ọ bụ na aka gị, mana na nke ikpeazụ ị nwere ike were naanị nzọụkwụ atọ. Egwuregwu ndị ọzọ dị na Ireland nwere ọtụtụ ndị na-eso ụzọ bụ Gaelic football, ụdị egwuregwu dị n'etiti bọọlụ anyị maara na rugby.
Egwuregwu Irish na ịgba egwu
Enweghị ike ịga Ireland n’enweghi obi uto dika egwu na egwu ya. A maara egwu ndi mmadu n'ọtụtụ ebe dị ka egwu egwu egwu Celtic. Enwere otutu ụda na abụ olu ụtọ echekwara kemgbe ọtụtụ narị afọ. Na Ireland anyị kwesịrị ịchọ ụfọdụ egwu egwu Irish na egwu ọdịnala.
Omsbọchị Bloomsday abụghị otu ọdịnala ndị ahụ metụtara Celts na nke laghachiri ọtụtụ narị afọ mana ọ dị ebe ahụ ma ọ na-adịwanye mkpa. Ihe June 16 bu mgbe emere ezumike a, kamgbe 1954, nke a na-eji asọpụrụ n'ụdị akụkọ Ulysses nke James Joyce. Otu n'ime ọdịnala bụ iri otu ihe ahụ dị ka onye protagonist ụbọchị ahụ. Mana ọ gbadoro ụkwụ na ịgbaso nzọụkwụ Dublin. Enwere ọtụtụ nzute n'obodo ahụ ndị na-eji ejiji maka emume a.
Pub na Guinness
E nwere ihe ọzọ nwere ike ịbụ ihe niile ọdịnala n'ụzọ ndụ Irish. Ọ bụrụ n'ị gaa Dublin, ị gaghị eleghara Ogwe Templelọ Nsọ anya, ebe ị nwere ike ịnụ ụtọ ụlọ mmanya ndị Irish, ebe ị ga-enwe ọ enjoyụ, mkparịta ụka na n'ezie ezigbo Guinness, biya mma kacha mma.